Agasti kuthetha ukuba lixesha lokuba ucwangcise ukuhamba esikolweni sokubhankanya , kwaye kufuneka ukwazi oko kufuneka ukuzisa kwi-campus. Nangona zonke izikolo zihlukileyo, ezi zikhokelo eziqhelekileyo. Qinisekisa ukuba uhlolisise i-ofisi yakho yokuphila yomfundi malunga nezikolo zakho.
Abafundi besikolo banokulindela ukuba isikolo sabo siza kubonelela ngeempahla ezisisiseko, kubandakanya umbhede weesibini kunye nomathebhu, idesksi, isihlalo, umgcini we-dresser kunye / okanye ii-unit units. Umntu ngamnye uya kuhlala eneempahla zakhe, kodwa ukulungiswa kwendawo kungahluka.
Ngoko yintoni enye oyifunayo? Nazi izinto ezininzi zokubeka uluhlu lwakho lokuthenga emva kwesikolo.
Johner Izithombe / Getty Izithombe
Ngelixa unobhede kunye nomattile kunikezelwa, kufuneka ufikelele iibhedi zakho:
Iiseti ezi-2 (ngokuqhelekileyo ziyi-twin okanye ii-twin XL ubukhulu, kodwa qiniseka ukuba ubuze i-ofisi yakho yokuphila ngaphambi kokuba uthenge). Ukuba neesethi ezimbini zeeshicilelo kuthetha ukuba unako ukuhlala unomnye embhedeni kunye nomnye kwindawo yokuhlamba.
Umgcini weemitha zokugcina igumbi elihlambulukileyo.
Ingubo kunye / okanye umthuthuzeli . Ngokuxhomekeka apho uya esikolweni kwaye kubanda kangakanani ukuba kungene ebusika, unokufuna ukuzisa ingubo enye yokukhanya kunye nesigqoko esisodwa esikhulu.
Glow Decor / Getty Izithombe
Ungakulibali indawo yokuhlambela yakho kunye nokuhlambulula, onokufuna ukugcina kwigumbi lakho kwaye uphathe kwindawo yokugezela xa kufuneka. Iibhokhwe ezingasidinga ziquka:
I-tote ye-shower ukuhamba nayo yonke indlu yangasese kuyo
Iibhola kunye neendwangu zokuhlamba - njengama sheetshi akho, zenze ubuncinane ubuncinane iisethi ukwenzela ukuba unokuhlala uhlambulukile kwi-tock.
Izicathulo zokuzihlamba , ezisoloko zibini i-flip flops
I-Shampoo, i-conditioner, isepha, ukuhlamba umzimba
I-toothpaste, i-toothbrush, uhlamba lomlomo, i-teeth floss
Iipotots swabs, iibhola zepotton
I-brush kunye nekhefu kunye nayiphina imveliso yeenwele owusebenzisa rhoqo.
I-Sunscreen kunye ne-lotion - ezi zidlalwa ngamanye amazwe, kodwa ngexesha elithile uya kuba uchitha ngaphandle kwezemidlalo nemisebenzi, ukukhumbula ukugqoka isikrini selanga kunokukugcina uphilile kwaye ushiye umkhululo. I-Lotion iyincedo xa umoya ubombile ebusika kwaye kufuneka uququzelele.
Dougal Waters / Getty Izithombe
Oku kungabonakala kungekho-brainer, kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuzisa iintlobo ezahlukeneyo zokugqoka, ngakumbi ukuba awukwazi ukubuyela ekhaya ngokuqhelekileyo.
Qala ngokuqinisekisa ukuba unempahla yeefowuni yokugqoka . Imigaqo yokugqoka ingahluka, kodwa ngokuqhelekileyo igqoke iingubo okanye iingubo kunye neengubo zokugqoka zifunwa, kunye neengqekembe-phantsi, ii-ties kunye ne-blazers. Qinisekisa ukuba ubuze i-ofisi yakho yokuphila yomfundi malunga neemfuno zokuziphatha ezifanelekileyo.
Ukuba uya esikolweni apho ukuwa kunye nobusika kunokuzisa ukufudumala kwesimo sezulu, kuquka imvula, iqhwa kunye nesimo sezulu ebanda, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba uzisa:
Iibhothi zasebusika (ukungena kwamanzi okanye ukunganyanzelekanga kwamanzi)
I-Scarf, isitya sasebusika, iiglavu
Unokucinga ngokuzisa uluhlu olubanzi lwezinto zokugqoka, njengoko unokufumana kwiimeko ezahlukeneyo ezifuna izambatho ezahlukeneyo. Kuza kufuneka uvelise:
Ugqoke iimpahla kwiimeko eziqhelekileyo
Ijeans, iifutshane kunye nezinye iimpahla eziqhelekileyo
Izitya, izicathulo zokugqoka, i-flip flops
Iimpuphu kunye nama-sweatshirts
Iidraphu kunye neetanki
Fuse / Getty Izithombe
Uya kumangaliswa ukuba baninzi abafundi abalibale malunga nale nkalo yesikolo sokubhukuda: hlamba iimpahla zakho. Ezinye izikolo zinikeza iinkonzo zokuhlamba apho ungathumela khona iingubo zakho ukuba zihlanjululwe, kodwa ukuba uceba ukwenza ngokwakho, yiloo nto oyifunayo:
Ukuhlamba impahla yokuhlamba impahla, i-remover stain, ama-sheer dryer
Inkqubo yokuthunga encinci
Iikota okanye iimfuno zeekhadi lekhadi
Izambatho zamehlo kunye neengubo zokugqoka
Izitya zokugcina izitya ezingaphantsi kwezinto zokugqoka kunye / okanye ukugcina umbane wakho
Idesk & Izixhobo zeSikolo
Lena Mcedola / Getty Izithombe
Sikolo, emva koko konke. Ngoko qiniseka ukuba unayo:
Ingxowa okanye isikhwama ukuhambisa iincwadi / izixhobo zakho eklasini
Yonke iteknoloji efunekayo (iPads, iiptops, i-calculator)
Iwashi ye-alamu (kunye nokugcinwa kwebhethri xa kwenzeka ulahlekelwa amandla)
Ithenda yeseki esebenzayo yamandla
USB okanye Flash Drive
Izixhobo zesikolo (oko kukuthi, ipenki, iipensile, izibophelelo, iincwadi, i-post-yayo, i-highlighters, i-stapler, njl.
Ikhalenda / isabelo senkonzo / isicwangciso-le nto ingaba ifowuni okanye ithebhulethi yakho, kodwa qiniseka ukuba unendlela ethile yokugcina yonke into
Umkhuseli wokukhusela kunye nentambo yokwandisa
Isihlalo sokuhlala (xa umphathi wedesksi engabonakaliyo)
Ungalilibali iishaja zakho kwikhompyutha yakho kunye nomnxeba !
Izixhobo ezixhaswayo kunye nokutya
UJanine Lamontagne / Getty Izithombe
Nangona izikolo zasebhankini zinika ukutya abafundi, abaninzi banandipha ukugcina ukutya okufutshane ngokukhawuleza. Musa ukuphola apha uze uqiniseke ukuba ungaphuli nayiphi na imithetho, nangona kunjalo. Unokuzisa:
Iingxowa ezikhunjulwayo, njengeTupperware
I- mug yogu / inkomishi / ibhotile yamanzi
Iingxowa eziphathekayo / izitya / izitya / izitsha
Ijusi okanye iziselo zezemidlalo ezingafuneki ukuba zifrijini.
Ukuhlamba iiswelo / isiponji
Ukuncedwa kwamanye ama-snacks, njengama-popcorn kunye nama-chips
Amachiza kunye nezinto zokuNceda
Isikolo sakho siya kuba neminye imiyalelo ethile malunga nendlela amayeza kunye nezinto zokuqala zokuncedisa zilawulwa ngayo, kwaye akunqabile ukwazi ukugcina unyango kwigumbi lakho. Hlola kunye neziko lempilo okanye i-ofisi yokuphila yomfundi ukuba ubuze indlela yokusingatha oku.
Ukuba nekiti lakho lokuqala lokunceda lunokukunceda ukutyunjwa kwamaphepha kunye neentlobo
Yenza imithi efunekayo, kodwa qinisekisa ukuba ubazisa kumntu omdala ofanelekileyo kwi-campus ukuze ugcinwe ngokukhuselekileyo
Ngaphandle kwonyango yamayeza angavunyelwe ukuba igcinwe kumagumbi abafundi, ke qiniseka ukuba ukhangele
Izikolo ezizimeleyo zisebenzisa iPads
Omnye Umyalelo weBhola: Ngaba iMithetho yeGalofu iyakwenqabela ukutshintsha iibhola ngexesha lojikeleze?
I-Thermodynamics: Inkqubo ye-Adiabatic
Indlela yokudibanisa "umtshato" (ukutshata)
I-Top 10 Bad Boss in Movies